Netflix na HBO weputara na February 2020 | Akụkọ akụrụngwa
Netflix na HBO wepụtara na February 2020
Anyị na-alaghachi na nhọpụta nke ọnwa ọ bụla iji kọọrọ gị nke kacha mma wepụtara na isi gụgharia ọdịnaya nyiwe, ka ị ghara ileghara ihe ọ bụla anya, naanị mgbe ahụ ka ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ usoro niile na fim ndị ọrụ gị kwadebere. maka gị, yabụ, were uru ahụ tinye isiokwu a na ibe edokọbara ka ị ghara ileghara ihe ọ bụla anya. Anyị nwere ọdịnaya site na Netflix, HBO maka ọnwa nke ọnwa Febụwarị 2020, nwere ọdịnaya dị ụtọ dịka nke abụọ nke Narcos: Mexico. Ihe karịrị iri itoolu usoro ọhụrụ na ihe nkiri maka ndị ọrụ niile, ka anyị gaa ebe ahụ.
1 Netflix weputara na February 2020
1.1 Usoro ndị ewepụtara
1.2 Ihe nkiri ndị a na-ahapụ
1.3 Akwụkwọ na ọdịnaya ụmụaka
2 HBO gosipụtara na February 2020
2.1 Usoro na-premiered
2.2 Ihe nkiri ndị ewepụtara
2.3 'Smụaka ọdịnaya na akwụkwọ akụkọ
Netflix weputara na February 2020
Usoro ndị ewepụtara
Anyị malitere na usoro nke ndị na-eweta ọdịnaya kachasị dị na ahịa, Netflix. Firmlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu ịkụ nzọ na mmepe nke ọdịnaya ya ma ugbu a, egwu ahụ yiri ka ọ na-aga nke ọma, na ee, n'ọnwa Machị ka a na-atụ anya mbata nke Disney +, nke nwere ike ịkwụsị ịma jijiji nke ahịa na-amalite. ka e jupụta ya. Anyị malitere na mmalite nke Locke & Igodo, mmegharị nke ọchị ahụ bụ Joe Hill na Gabriel Rodríguez nke juputara na ntorobịa ntorobịa na obere ọgwụ nke ụjọ, oge maka ihe ọchị.
Anyị anaghị eleghara oge nke abụọ nke Carbon gbanwere, Netflix kachasị usoro sci-fi nke na-eme ka anyị nwee ngosipụta CGI pụrụ iche. Ọtụtụ ndị ọrụ nọ na-eche ihe kpatara ụlọ ọrụ jiri were ogologo oge (ma na-eme obere mgbasa ozi) n'usoro dị ka nke a, mana nchere ahụ agwụla na February 27. N'ikwu eziokwu, ọ bụrụ na ị hụbeghị usoro a, ọ bụ oge dị mma iji gbadata iji rụọ ọrụ na oge mbụ, n'ihi na nsonaazụ ya dị oke egwu, na-atụle ihe Netflix nwerela anyị.
Anyị anaghị echefu Narcos: Mexico nke ruru oge nke abụọ ya, Anyị ga-alaghachi na akụkọ ihe mere eme nke ezinụlọ Sinaloa na mgba ya dị n'ime iji nọgide na-a drugsụ ọgwụ ọjọọ n'okporo ámá nke United States of America na ọbụna na Europe, akụkọ na-akpali akpali nke na-agaghị ahapụ gị enweghị mmasị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị sorola mbipụta mbụ. nke Narcos, lekwasịrị anya karịsịa n’akụkọ Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Tom Papa: You're Na-eme Oké!: February 4
Locke & Key: February 7
Lovehụnanya M hụrụ n'anya: February 7
Cgbè Ahụhụ: February 8
Narcos Mexico: T2 - February 13
Ishụnanya kpuru ìsì: February 13
Girlsmụ nwanyị Cable: S5 Nkebi 1 - February 14
Ekele: February 21
Ọnụ 7zọ ámá 21: February XNUMX
Nke a na-eti m ihe: February 26
Ndị na-eso ụzọ: February 27
Carbon gbanwere: S2 - February 27
Achịkọta: February 27
Queen Sono: February 28
Ihe nkiri ndị a na-ahapụ
Anyị nwekwara ebe maka ihe nkiri, ọ gaghị abụ obere. Ihe pụtara na mbụ bụ na Netflix ekpebiela ịmalite fim mbụ Studio Ghibli: Ulo elu-igwe n’elu-igwe; Agbata Obi Onye Agbata Obi M; Akụkọ banyere Earthsea na Porco Rosso n'etiti ndị ọzọ. Nke ikpeazu bu otu ulo oru mgbasa ozi pere mpe ma eweputara ya ihe dika afo iri ato gara aga ma na akuko banyere onye oso ugbo elu onye agha nke si mba uwa nke mbu mechara buru ezi site na onu onu.
Anyị nwekwara ụfọdụ sinima Spanish Okpokoro Na-enweghị njedebe, otu n'ime ihe nkiri ndị rụpụtara ọrụ dị mkpa n'oge gala 2020 Goya Awards. E debere ya na Spanish Civil War ma kọọ akụkọ banyere otu nwoke mechiri emechi ruo afọ iri atọ n'ụlọ nke ya n'ihi ụjọ ntaramahụhụ na Imeri akuku nwere ike iburu ya.
The Castle in the Sky: Febụwarị 1
Agbata Obi Ezigbo Onye M gbara: February 1
Kiki: Dnyefe :lọ: February 1
Ikike icheta Yesnyaahụ: February 1
Porco Rosso: February 1
Enwere m ike ịnụ Oké Osimiri: February 1
Nwa nwanyi: February 1
To All Bomụaka I'vemụaka M Hụrụ n'Anya Tupu 2:12 February
Ọchịchọ Dragọn - Akụkọ Gị: February 13
Ogwe Na-enweghị njedebe: February 28
Akwụkwọ na ọdịnaya ụmụaka
Na akwụkwọ akụkọ anyị na-egosipụta El Ọgwụ, na-akọ otú otu ọkachamara nwa ya nwoke onye ịgba chaa chaa riri isi si amalite ịchọpụta nrụrụ aka dị n’ime ụlọ ọrụ ndị na-azụ ahịa opiates, karịsịa na United States of America.
Lọ ọgwụ ahụ: February 5
Onye gburu Malcolm X?: February 7
Banyere ọdịnaya ụmụaka anyị na-egosipụta Pokèmon: Mewtwo Laghachi azụ - Mbido, Ọ naghị afụ ụfụ, ọkachasị na ihe nkiri a nwere ezigbo CGI.
Dragons ka nnapụta: S2 - February 7
Pokèmon: Mewtwo na-alaghachi azụ: February 27
HBO gosipụtara na February 2020
Banyere usoro, ka anyị kwuo na HBO n'oge ọnwa a nke ọnwa February dị. Anyị na-egosi na ee McMillion $, usoro siri ike ide ede nke na-akọ akụkọ banyere atụmatụ aghụghọ emere atụmatụ nke metụtara ụlọ ọrụ abụọ kachasị ewu ewu na United States of America: McDonald's na Monopoly. Otu onye nyocha zuru ọtụtụ iberibe egwuregwu a ma ama nke ụdị abụọ ahụ jikọrọ ọnụ na ndị ọzọ bụ akụkọ dị ọcha.
Anyị na-ezute ebighị ebi nke Katy chọrọe, a spinoff nke Riverdale na ndị protagonists nke Archie Comics, njem ebe ụmụ nwanyị na-enye iwu, ị ga-atụ uche ya?
McMillion $: February 4
Katy Keene: February 7
Nhazi Dị Elu: T4 - February 8
Akwa Enyi: S2 - February 10
Kwụghachi azụ: February 15
Ikpeazụ Ikpeazụ Tonight na John Oliver: S7 - February 18
Ihe nkiri ndị ewepụtara
Na Febụwarị HBO na-etinye ihe ọ bụla na sinima ebe anyị na-ahụ ihe nkiri dị elu dị elu dịka Ọdọ mmiri ọdọ mmiri. Anyị anaghị echefu nnukwu ihe nkiri nkiri Will Smith na nwa ya nwoke Jaden Smith: Na-achọ obi ụtọ.
Nkịta ọdọ mmiri: February 1
Mechie: February 1
Ntụziaka: February 1
Blue Hel: February 1
Worwa okpuru - Agha Ọbara: February 1
Ahụhụ: February 1
Na-achụso obi ụtọ: February 1
Nnukwu Ego: February 1
Hitch: February 1
Nwunye Nwunye: February 7
Ọrụ :tali: February 7
Ọrụ Paranormal-Phantom Dimension: February 7
Mgbe M Chọtara Gị: February 15
Nwunye: February 14
The Untouchables nke Eliot Ness: February 14
Obodo Cholocate: February 28
'Smụaka ọdịnaya na akwụkwọ akụkọ
Ben 10: S1 na T3 - February 7
Doraemon na Nnukwu Adventure na Antarctica
Ike Mike: S1 - February 28
Teenage Mutant Ninja Turtles: S5 - Febụwarị 28
Ali & Cavett: Akụkọ banyere teepu - February 12
Anyị bụ nrọ: February 12
Whitmer Tohomas: February 23
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ihe nkiri na usoro » Netflix na HBO wepụtara na February 2020
Ọdụ ụgbọ elu Barajas dị na Madrid na-akwadebe maka ọdịda mberede